OL - OL: Nifamotoana taminy ny VAR, hoy ny navalin'i Traore - Olympique Lyonnais - FOOT 01 - TELEVALA RELAY
HOME » SPORTS OL - OL: Nanana nify azy ny VAR, namaly i Traore - Olympique Lyonnais - FOOT 01
OL - OL: Nanana nify azy ny VAR, namaly i Traore - Olympique Lyonnais - FOOT 01
Sary Icon Sport
namoaka Zoma 11 Janoary 2019 mankany 23: 00 in: OL, Ligue 1, Rennes.
Bertrand Traore dia nanao alina mifanohitra amin'ny lalao Olympique Lyonnais manoloana an'i Reims (1-1). Tao anatin'ny tifitra tsara rehetra nataon'ireo Gones, ny Burkinabé iraisam-pirenena voalohany dia nitifitra ny alahelony noho ny mpitsara sy ny VAR. Ao amin'ny tapany voalohany amin'ny taona ho tokoa 23 mpilalao efa niloa-ny scoring, fa Mr. Millot Nanapa-kevitra ny tsy ny tanjony ho debatable offside, araka ny Var, izay nanamafy ny fanapahan-kevitry ny mpitsara mpanampy (14e).
Traore avy eo no afaka mahazo ny sazy ho an'ny lehibe irery Abdelhamid ao amin'ny faritra Champagne, fa ny mpitsara dia manana lahatsary, tamin'ity indray mitoraka ity, nitsara ny fahadisoana niniana (53e). Ary farany, nahazo valisoa noho ny ezaka nataony i Chelsea teo aloha tamin'ny famonoana ny tanjon'ny equilizer (70e). Fihetsiketsehana izay namarana ny lalao, satria i Bruno Genesio dia nanafaka azy tamin'ny ady (71e). Ity Zoma ity, Traore dia nanao fiara fitaterana an-dalamby.
Nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity FOOT 01
Guest Africa - CAN 2019: "Ny iray amin'ireo fanamby hahatonga ny fifaninanana ho mahafinaritra dia ny fanaovana azy ho fifaninanana amin'ny fankalazana"
Football: Ny Niçois Adrien Tameze dia nandà tolotra roa